RW Rooble oo shaaciyay goorta lasoo afjarayo doorashadda Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo shaaciyay goorta lasoo afjarayo doorashadda Aqalka Sare
Wuxuu xusay in isaga iyo Madaxda Maamullada ay kuwada hadleen ZOOM, islamarkaana ay isla meel dhigeen inay mudo hal todobaad kusoo dhameeyaan doorashadda Aqalka Sare.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Maanta ka sheegay Shirka Gollaha Wasiiradda in uu jiro dib u dhac ku yimid jawadlkii loogu tala-galay in lagu dhameeyo doorashadda Aqalka Sare.
Wuxuu xusay in isaga iyo Madaxda Maamullada ay kuwada hadleen ZOOM, islamarkaana ay isla meel dhigeen inay mudo hal todobaad kusoo dhameeyaan doorashadda Aqalka Sare, oo la filayay inay 1-da August dhamaato.
"Inkastoo uu jiro dib u dhac yar ,hadana kulan labo habeen ka hor uu la yeeshay Madasha Qaran ay isku afgarteen in ay ku soo afjaraan doorashada Aqalka Sare asbuuca soo socda, ka dibna ay isugu yimaadaan kulan looga arinsanayo sidii horey loogu sii anbaqaadi lahaa doorashada Gollaha Shacabka," ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.
Sababat dib u dhaca keenaya ayaa ah in Madaxda Maamulada qaarkood ay soo daahiyeen liiska Mushariixinta, oo illaa hadda aan laga heynin Puntland, Galmudug iyo HirShabeelle.
Jubaland ayaa dooratay 4 kursi, halka Koonfur Galbeed 5 dooratay, waxaana labada maamul soo saareen Senataro mucaarad ah iyo kuwa muxaafid ah, iyadoo isha lagu hayo Guudlaawe iyo Qoor-Qoor waxa ay la imaan doonaan.
Rooble ayaa hadda ka shaqeynaya sidii uu ku xalin lahaa khilaafka jira, oo ugu horeeyo midka Gudiga doorashadda Somaliland, oo Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi isku hayaan hogaankiisa.